Faahfaahin Rasaas xalay Laascaanood ka dhacday iyo Xildhibaan Dhakool oo ku lug yeeshay | Xaysimo
Home War Faahfaahin Rasaas xalay Laascaanood ka dhacday iyo Xildhibaan Dhakool oo ku lug...
Faahfaahin Rasaas xalay Laascaanood ka dhacday iyo Xildhibaan Dhakool oo ku lug yeeshay
Xalay soo dhowaadkii ayaa magaalada Laascaanood waxaa laga maqlay dhawaqa Rasaasta Lidka diyaaradaha, taasoo ahayd wax beryahan la ilaaway.
Faahfaahin dheeraada oo arinta ka soo baxday ayaa sheegay in Ciidamada Somaliland ay rasaasta ku kala eryayeen dhagaal dhex maray Maleeshiyo daacad u ah Xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo ka tirsan Golaha Wakiilada Somaliland, iyo dad shacab ah oo beryahanba uu muran dhuleed ka taagnaa.
Dadka degaanka ayaa beryahanba ka qaylinayey weerar uu ku hayo Xildhibaan Dhakool oo dhulkoodii ay deganaayeen ka awoow ka awoow, waraaqo uga soo sameystay Dawladda hoose.
Dawladda hoose iyo waraaqa ay bixiyaan ayaa ah dhibaatada ugu badan ee degaanka ka tagaan, halka Maamulka Gobolkana lagu xamanayo dalinyaro iyo khibrad la’aan, ku mashquulsan ficiladii dhalinyaronimada.
Waxaa Muuqata in Xildhibaan Dakool oo ka mid ah xubnihii ugu horeeyey ee uu saameeyey handaraabkii Madaxweyne Muuse uu iminka u wareegay Magaalada Laascaanood, halkaas oo ay u joogaan dadkii uu dawladiii hore sii abuurtay iyo Caagleyaal badan oo uu isagu wax ka dhisay.
Inkastoo dadka dhulkan degani ay beryahanba saxaafada ka cabanayeen, hadana waxaad moodaa in Dawladda Muuse Biixi ay ka hesho inay daawato cabashada shacabka.